Dalxiiska Uganda Hadda waxa uu Bartilmaameedsadaa Maamulayaasha Dhiirigelinta Safarka Gudaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Dalxiiska Uganda Hadda waxa uu Bartilmaameedsadaa Maamulayaasha Dhiirigelinta Safarka Gudaha
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah
Madaxda Uganda quraacda
Ururka Dalxiiska Uganda (UTA) iyo Hay'adda Gaarka loo leeyahay ee Uganda (PSFU) ayaa soo qabanqaabiyay quraac iyo bandhig maamuleed Jimcihii, Oktoobar 22, 2021, Hotel Kampala Sheraton.
Munaasabadda waxaa lagu qabtey COVID-19 Barnaamijka Kajawaabcelinta Dhaqaale iyo Soo-kabashada Dhaqaale (CERRRP).
Tani waxay ahayd isku day lagu kicinayo socdaalka dhiirigelinta ee qaybta shirkadaha gudaha ee lagu beegsanayo madaxda shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha iyo shirkadaha.
Munaasabadan ayaa waxaa furay Xoghayaha Joogtada ah (PS) ee Wasaaradda Dalxiiska Duurjoogta iyo qadiimiga (MTWA) Doreen Katusiime.
Iyada oo la hadlaysa madaxda sare ee fulinta iyo bandhigayaasha ka soo qayb galay, si dhab ah iyo jidh ahaanba, waxay ka warbixisay in ganacsiga gaarka loo leeyahay ay la kulmeen shaqo xumo, shaqo joojin, luntay dakhli ganacsi iyo heer qaran iyo luminta sarifka lacagaha qalaad oo khatar ku ah ilaalinta. Iyada oo ay taasi jirto, suuqa gudaha waxa uu noqday bar-kulan la isku halayn karo marka loo eego caqabadahan.
Waxay xustay in ay sii kordhayso booqashada ay dadka Uganda ku imanayaan goobaha dalxiiska ee kala duwan oo ay ka mid yihiin jardiinooyinka qaranka, Isha Nile-ka, xeebaha, Uganda Xarunta Waxbarashada Duurjoogta iyo Duurjoogta (UWEC), jasiiradaha, iyo kaabayaasha helitaanka xididka ayaa wanaajiyay u janjeera safarka iyo maalgelinta hoyga iyo hawlaha dalxiiska ee meelaha soo jiidashada ayaa si tartiib tartiib ah u koraya. Waxay intaa ku dartay in baahida ay taageerto baaxadda sii kordhaysa ee dabaqadda dhexe, qulqulka qaybaha shirkadaha, iyo kacaanka ICT oo xogta ka dhigay mid la heli karo.
“Ugandaan badan ayaa leh dakhli ku-talogal ah iyo siyaabaha ay ku ballaarinayaan xog-ururinta kharashkooda. Faa'iidooyinkan wanaagsani waxay ka tarjumayaan fursad aan inta badan laga faa'iidaysan. Dalabka dalxiiska gudaha waxaa dabada ka riixaya asxaabta iyo qaraabada soo booqday; guuritaanka reer miyiga; dhacdooyinka dhaqanka; iyo xafladaha ay ka mid yihiin dhalashada, guurka, xafladaha hindisaha, iwm. Munaasabadahani waa xaflado isku xira bulshadeena, munaasabadaha dhaqanka ka dib dib u soo celinta boqortooyooyinkii soo jireenka ahaa ayaa sidoo kale soo jiidatay xiiso badan oo ay ka mid yihiin sannad-guurada caleema-saarka iyo booqashooyinka hoggaamiye dhaqameedku ay ku tagaan dadkooda." ayuu yiri PS.
Waxay sharaxday darawaliinta kale ee dalxiiska gudaha oo ay ku jiraan dhacdooyinka caqiidada ku salaysan, kuwa ugu caansan waa Xajka Shuhadada ee Namugongo Uganda ee 3-da Juun, saliibyada Pentecostal, shirarka, dhiirigelinta, aqoon-is-weydaarsiyada, iyo shirarka noqday qalab awood leh oo loogu talagalay abaabulka bulshada iyo dhaqaalaha iyo darawaliinta kale ee dhiirigelinta ah kuwaas oo u safra sababo caafimaad, madadaalo, dukaameysi, waxbarasho, iyo cilmi baaris.
Waxay ku ammaantay Hay'adda Master Card Foundation inay u timid inay ka taageerto waaxda dalxiiska ee soo kabashada iyo adkeysiga waxayna ka codsatay madaxda shirkadaha ee ka qayb galaya jir ahaan iyo khadka tooska ah inay qaataan safarka dhiirigelinta ah.
Ku-simaha madaxa fulinta ee hay’adda gaarka loo leeyahay ee Uganda (PSFU), Agaasimaha Francis Kisirinya, ayaa sheegay in ujeeddada la isugu yeeray quraacda ay tahay in dib loo soo celiyo socdaalka dhiirigelinta da’da ee ururada iyo shaqaalaha Uganda. Sababtiisa, wuxuu sheegay in ay tahay sababtoo ah waa ururada shirkadaha iyo shaqaalahooda kuwaas oo haysta dakhli la iska tuuri karo oo la gelin karo safar dhiirigelin ah.
Waxa uu ballan qaaday in PSFU ay si adag uga shaqayn doonto sidii loo hubin lahaa in ganacsiga gaarka loo leeyahay uu yeesho jawi ganacsi oo wanaagsan iyada oo loo marayo u doodista, u ololaynta, iyo cilmi-baadhista kobaca ganacsiga waara. Wuxuu sheegay in waaxda dalxiiska iyo martigelinta ay tahay mid ka mid ah waaxyaha sida weyn uu u saameeyay saameynta masiibada COVID-19. Si kastaba ha noqotee, hadda waaxdu waxay arkaysaa waddo soo kabasho joogto ah iyada oo loo marayo tillaabooyin xakameyn ah oo ay dejisay dowladda.
Sida laga soo xigtay warbixinta MTWA, masiibada COVID-19 waxay dhiirigelisay dadka reer Uganda ee aan markii hore awoodin inay u safraan si ay u soo booqdaan meelaha soo jiidashada ee dalkooda. Intii u dhaxaysay Agoosto 2020 iyo Maarso 2021, dalxiiska gudaha ayaa saddex jibaarmay min 21,000 ilaa 62,000 dalxiisayaal. Marka la eego tirakoobyadan, mashaariicdani waa tiro aad u sareysa laga bilaabo Maarso ilaa Disembar iyadoo la tixgelinayo in warshaduhu ay galayaan xilliga ugu sarreeya.
Wuxuu ku qeexay safarka dhiirigelinta inuu yahay abaal-marin ama barnaamijka daacadnimada kaas oo qaata qaab safar kharash-dhammaan ah oo leh barnaamij dhacdooyin iyo hawlo qorshaysan. Labada shirkadood ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxay ku daraan safar dhiirigelin ah oo aqoonsan faa'iidooyinka u dhexeeya daacadnimada weyn ee shaqaalaha, xiriirka adag ee kooxda ee u dhexeeya loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha, dhiirigelinta la ilaaliyo, bixinta yoolalka, tartanka caafimaadka leh ee goobta shaqada, kor u qaadista hal-abuurka shaqaalaha iyo wax soo saarka, abuurista dhaqanka shirkadda togan, iyo samaynta ganacsiga mid soo jiidasho leh dadka la qorayo.
Waxa uu intaa ku daray in safarka dhiirigelintu uu leeyahay awood isbedel dhaqaale iyo bulsho oo baaxad leh oo loogu talagalay shaqaalaha iyo dhaqaalaha taas oo laga yaabo inay ka mid tahay kicinta kobaca waxqabadka xooggan iyo u doodista, abuurista kobaca iibka la qiyaasi karo, iyo soo celinta maalgashiga. Iyada oo loo marayo maalgelinta is-wax-u-qabsiga, waxay bixisaa waayo-aragnimo gaar ah oo asxaabta la safra hoggaamiyeyaasha shirkadda oo ka waxtar badan marka ay iskood u safraan. Waxa kale oo ay taageertaa awoodda isku toosinta ujeedooyinka shirkadda, ujeedooyinka shakhsi ahaaneed, iyo u doodista sumadda. Cilmi-baadhisyada soo ifbaxaya waxay tilmaamaysaa in xidhiidhka shucuureed ee calaamaduhu uu ka awood badan yahay dhiirrigeliyaasha jira oo kali ah dadaalka iibka.
Safarka dhiirigelinta ah ayaa sidoo kale saameyn dhaqaale ku leh safarka dhaqaalaha dib u soo kabashada ayaa ah kicin weyn oo dib u soo nooleynta dhaqaalaha adduunka maadaama shirarka fool ka foolka ah ay dhiirigeliyaan iskaashiga iyo isku xirka bulshada. Hudheelada ku toosan shirkadaha maaraynta meelaha maxaliga ah waxay la kulmaan soo laabasho wanaagsan oo ku saabsan maalgashiga iyo shaqaalaynta tooska ah ee dhalinyarada la socota, sidoo kale. Sidaa darteed, waxa uu ku dhiirri-galiyay maamulayaasha goobta iyo hay’adaha dawladda in ay dejiyaan siyaasado dhiirigelinaya IT-ga iyo waaxaha maamulka oo inta badan la ilduufo.
Waxa uu ka codsaday dawladda in ay ka taageerto horumarinta iyo dejinta siyaasadda hab-raacyada kala duwan ee wax soo saarka dalxiiska si loo dhiirrigeliyo tartanka dhinacyada shirarka, dhiirigelinta, shirarka iyo bandhigyada (MICE), dalxiiska beeraha, dalxiiska bulshada ku salaysan, dalxiiska dhaqanka ku salaysan. dalxiiska diinta, iwm.
Waa in xoogga la saaraa sidii loo soo bandhigi lahaa khibrado kala duwan si ay dadka Ugandha u helaan oo ay u abuuraan sumad qaran oo xoog leh iyo abuurista tafsiir joogta ah oo ku saabsan sheekada Ugandha ee badeecadaha kala duwan ee dalxiiska iyo maalgelinta cilmi baarista suuqa.
Wuxuu u mahadceliyey hay’adda horumarinta iyo kafaala-qaadka Master Card Foundation oo la timid miisaaniyad dhan UGX32 bilyan (US$ 8.98 milyan) taasoo ay u igmatay dowladda iyo hay’adaha gaarka loo leeyahay. Tani waxay ku qalabaysay tas-hiilaadka caafimaadka 40,000 xirmooyinka baaritaanka PCR, qalabka shaybaarada ee Xafiiska Qaranka ee Heerarka Uganda (UNBS) ee shahaadaynta alaabta, sariiraha cisbitaalka, qalabka ilaalinta shaqsiyeed (PPEs), iyo qalabka amniga.
Wuxuu ku soo gabagabeeyay ku dhawaaqay in PSFU ay sidoo kale kala shaqeyneyso dowladda si loo horumariyo istaraatiijiyad cusub oo horumarinta ganacsiga gaarka loo leeyahay si looga baxo COVID-19, xirmada sidoo kale waxaa ka mid ah istaraatiijiyad lagu soo kabsado laguna dhiso adkeysi iyadoo mid ka mid ah natiijooyinka uu yahay kulanka quraacda. .
Isagoo amaanaya bandhigga Kisirinya, Peter Mwanje, RT oo ka tirsan Cutubka Uganda, oo ah shirkad dhiirigelin leh oo gaar loo leeyahay, ayaa sheegay in isaga oo intaa ku daray in barnaamijyada dhiirigelinta ay ku lug yeelan karaan mas'uuliyadda bulshada ee shirkadda, tusaale ahaan rinjiyeynta goob dugsi, ama si fudud u aadida qolka nasashada, ama xeebta, ama adrenaline. hawlaha. Waxa uu kula taliyay hawl-wadeenada dalxiiska in ay sameeyaan miis u gaar ah socdaalka dhiirigelinta, sababtoo ah wuu ka duwan yahay shirarka.
Waxa uu sidoo kale ku celceliyay maamulayaasha in barnaamijyada dhiirigelinta aysan saameyn ku yeelan doonin sinaba miisaaniyadooda maadaama ay kaliya isticmaali doonaan boqolkiiba dakhliga ka soo xarooda faa'iidada xad dhaafka ah. Waxay ka dhigan tahay 7% dhammaan hawlaha dalxiiska ganacsigu waxay xisaabiyaan ilaa US$75 bilyan caalamka.
Pearl Horreau, Madaxweynaha UTA, oo ah hay'adda ugu sarreysa dalxiiska, socdaalka, iyo qaybta martigelinta, ayaa ka codsatay maamulayaasha inay ka faa'iidaystaan ​​dalxiiska gudaha sidii awood kale oo lagu dhiirigelinayo shaqaalahooda iyagoo abaalmarinaya inkasta oo fasaxyo la bixiyo si loo xoojiyo iskaashiga shirkadaha iyo si kor loogu qaado wax soo saarka goobta shaqada.
Bandhigyada waxaa daba socday fadhi guddi ah oo ay ka mid ahaayeen shakhsiyaadka caanka ah ee warshadaha oo ay dhexdhexaadinaysay Guddoomiyaha Dalxiiska ee MTWA, Viviane Lyazi. Waxay ka koobnayd Guddiga Dalxiiska Uganda (UTB) Ku-xigeenka Madaxa Sare Bradford Ochieng iyo Guddoomiyaha Ururka Hawl-wadeennada Dalxiiska Uganda (AUTO) iyo xubin ka tirsan guddiga PSFU, Civy Tumusiime Ochieng, oo sheegay in Uganda ay tahay waddanka afraad ee ugu kala duwan adduunka marka loo eego dhinaca dhaqanka. Waxa uu sheegay in daraasad ay BBC-du samaysay 2019-kii oo ay ku samaysay qurba-joogta lagu ogaaday in Uganda ay tahay waddanka ugu saaxiibka badan caalamka. Si kastaba ha ahaatee, daraasaadkii ugu dambeeyay ee tartanka ayaa lagu qiimeeyay Uganda 112 ka mid ah 140 wadan. Xagga caafimaadka iyo nadaafadda, waxay ahayd 136 140 ka mid ah taas oo ah dhibaato weyn. Waxa uu kula taliyey in looga baahan yahay in meesha loo socdo ay marka hore ka dhigaan mid soo jiidasho leh oo loo tartamo. Civy Tumusiime waxa ay ku dhiiri galisay maamulayaasha sare in ay galaan barmaamijka dalxiiska gudaha iyagoo ku dhiiri galinaya shaqaalahooda iyo qoysaskooda safarada gudaha,maadaama ay dhalinyaradu ku koraan si ay u qaataan dhaqanka.
Shirkadaha soo bandhigay qaybaha gaarka loo leeyahay waxaa ka mid ahaa Ururka Farshaxanka iyo Farshaxanka Qaranka ee Uganda, Murat Studios, Arlanda Tours and Travel, Orogu Tours, Petnah Africa Tours, Voyager African Safaris, Lets Go Travel, FCM Travel Solutions, Tours Pristine, Buffalo Safari Lodge, Papyrus Guest House, Park View Safari Lodge, Goobaha Safarka, Gazelle Safaris, Gorilla Heights Lodge, Pinnacle Africa, MJ Safaris, Asante Mama, Go Africa Safaris, Maleng Travel, Talent Africa, iyo Toro Kingdom.
Marsh wuxuu leeyahay,
Nofeembar 12, 2021 at 06: 33
Way fiicantahay in la arko Uganda oo diiradda saaraysa suuqa gudaha. Dalxiisaha caalamiga ah wuxuu u baahan yahay fiisaha si uu u booqdo iyo nidaamka e-visa weli waxaa ka buuxa dhibaatooyin. Tani waa in si degdeg ah wax looga qabtaa.